अब तपाईं बाहिर लाग्यो होला त्यसैले सबैले यी खेल को एक प्रशंसक छ कि, राम्रो आफ्नो हानि! समस्या धेरै 'विरोधी-gamers छ’ एक असल पुराना whinge आनन्द उठाउन तर तपाईं जीवन को लागि आफ्नो भोक राख्न सक्छ तरिका र खुसीसाथ खुवाउनु मदत हात छन् र wingers खुसीसाथ मौन!
आफ्नो सहयोगीहरूले खोज्नुहोस्, सबै सँगी gamers पुकारा एक कराउनु बाहिर स्थिति बाहिर पठाउन, Facebook मा कुनै पनि खेल खेल्छ कुनै ठूलो परस्पर लाभदायी मित्रताको मूल्य थाह. यो अझै पनि धेरै पत्रु बचाव मात्र सीमित छैन, कुनै पनि कट्टर किसानहरु या चकलेट crushers बदलामा एक सानो लागि बदलामा आफ्नो फिर्ता खरोंच खुसी हुनेछन्!
तपाईं आफ्नो वास्तविक साथीहरूलाई स्मार्ट सूची तिनीहरूलाई सबै थप्न गरिरहेका बाहिर लाग्यो एक पल्ट. त्यसपछि तपाईं केहि पोस्ट हरेक समय पत्रु बचाव बस श्रोताको रूपमा यो सूची चयन गर्न पक्का हुन. तपाईं साधारण सार्वजनिक बीच चयन गर्न सक्छन्, मित्र, घनिष्ठ मित्र र तपाईं भएको हुन सक्छ कुनै पनि स्मार्ट सूची. आफ्नो गोपनीयता सेटिङ संग परिचित, यो जसरी हरेक अब र फेरि आफ्नो सेटिङहरू ताजा गर्न कुनै पनि हानि गर्न सक्दैन!
तपाईँको तर्फबाट पोस्ट गर्न सक्छन् जो गर्न श्रोताको सिमित, हामी सबै जंगली गएका एक अनुप्रयोग को परिणाम देखेको छु, अनुरोध बाहिर पठाउन अनियमित मित्रहरुलाई सही र केन्द्र छोडेर पूरा गर्न. 'सेटिङ मा जानुहोस् र त्यसपछि अनुप्रयोग सेटिङहरू मा र चयन मात्र मलाई’ यी कुराहरू आफ्नो तर्फबाट पोस्ट कति मा छक्क पर्नु चाहन्छु, कुनै आश्चर्य केही मानिसहरू एक सानो पागल प्राप्त! तिनीहरूले साँच्चै तपाईं एक डीएसपी र इन्सपेक्टर बढुवा सिर्जना Everytime थाह वा लिडरबोर्डको मा एक मित्र पारित गर्ने आवश्यकता न…इमानदार म खेल (धेरै) र एप्स मेरो समाचार फिड देखि बन्द छन्.
के तपाईं पोस्ट कति अलिकता नकारात्मक प्रतिक्रिया copping छन् भने अनुप्रयोगहरू अवरुद्ध बोल्दै यो हरेक अब र फेरि एक सानो स्थिति बाहिर राख्न तिर्न सक्छ, पनि नाटकीय केही बस तिनीहरूले सानो 'एक्स मारा गर्न सक्ने मान्छे सम्झाउन’ कुनै पनि संदेश को माथि दायाँ कुनामा उनीहरूको समाचार फिड देखि यो प्रतिबन्ध लगाउने. फेसबुक बारे scariest कुरा साँच्चै उनि के गर्दै छन् कुनै विचार भएका मानिसहरूको संख्या छ!
के तपाईं पार आफ्नो मित्रहरुलाई देखि मदत र आफ्नो मित्रहरुलाई बस मदत लागि लागिपरेको बिन्ती छैनन् चाहिन्छ भनेर एक पुल मा बिताएका छन् भने (एक सारा घण्टा जस्तै भएको हुँदा यसको तपाईंलाई थाहा छ र तपाईं केवल तीन पासहरु को दुई छ) तपाईं सधैं facebook डिस्कनेक्ट र स्वयं कार्य पूरा गर्न सक्छन्. तपाईं यन्त्रमा हुँदा यो यस्तो फोन रूपमा काम स्पष्ट मात्र.
अनि बल्ल छैन साँच्चै एक facebook टिप तर तपाईं सक्छन् भनेर सम्झना5तपाईं खेल मा लोड छन् प्रत्येक उपकरणमा बस्ने, यति ipad, आईफोन, ल्याप्टप, डेस्कटप (आमा / साथी वा childs फोन!)